Indawo yokuhlala yase ŁaniaFrania - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yase ŁaniaFrania
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTomasz
UTomasz ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-Apartament Łania Frania ikwindlu eqeshisayo kwindawo yentengiso kumbindi we-Ustrzyki Dolne. Sinika iindwendwe zethu indawo entsha, ekhululekile, ene-air-conditioning enekhitshi, ibhedi enkulu ephindwe kabini, i-sofa esongwayo, umatshini wekofu oqeqeshiweyo, igumbi lokuhlambela elineshawa, iTV, i-Wi-Fi, i-balcony enombono wentaba, kwaye zonke izinto afunekayo ukuze yiholide olukhulu sinikela ikofu ezamahala, iti, amanzi iindwendwe, iitawuli, nelinen yethu ebhedini kunye neemveliso ukucoca.
I-Apartament Łania Frania ifumaneka e-Ustrzyki Dolne, nje i-1.8 km ukusuka e-Mały Król Ski Lift kunye ne-2 km ukusuka kumzila obomvu wabakhenkethi. Ibonisa inkundla yentenetya, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nebalcony.
I-Apartment enombono wentaba, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye ne-TV ene-flat-screen eneziteshi zesathelayithi.
Abasebenzi bathetha isiPolish nesiNgesi kwaye bahlala bevuya ukunceda.
Indawo ejikelezileyo ilungele imisebenzi eyahlukeneyo, kubandakanya ukutyibilika kunye nokuhamba ngebhayisikile.
IGromadzyń Ski Lift yi-2.1 km kude, kwaye iLaworta Ski Lift ikumgama oziikhilomitha ezi-5.
Le propathi inenye yezona ndawo zikumgangatho ophezulu e-Ustrzyki Dolne! Iindwendwe zanelisekile yiyo xa kuthelekiswa nezinye iipropathi.
Le propathi ikwabekwe elona xabiso lilungileyo e-Ustrzyki Dolne! Iindwendwe zifumana ngaphezulu ngeli xabiso xa kuthelekiswa nezinye iipropathi kwesi sixeko.
Ngokuthe ngqo ecaleni kwesakhiwo kukho ipaki yemoto yoluntu, ehlawulwa ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ukusuka kwi-7.30-17.30 ngexabiso le-PLN 1 ngeyure yokupaka. Iiyure ezingama-24 zokupaka simahla malunga neemoto ezingama-20 zibekwe malunga ne-100 m ukusuka kwisakhiwo, i-ski lift - i-Gromadzyń ikumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka kwindlu, i-Laworta 5 km kunye ne-Mały Król 1.8 km, ngelixa indawo yokuqubha ifumaneka malunga ne-2. km ukusuka indlu. nge ejimini, yokugquma, inkundla intenetya kunye namabala emidlalo
Umbuki zindwendwe ngu- Tomasz
Obiektem zarządza profesjonalna firma branży turystycznej która posiada łącznie sześć obiektów na wynajem dla turystów .Pięć z nich znajduje się w Ustrzykach Dolnych tj. Apartame…
Umamkeli uhlala ngaphandle kwendawo.Inombolo yomnxeba kumamkeli 515289215 Sikunqwenelela ukuhlala okumnandi.